‘नानी बिहे गर्ने उमेर भएन र!’ :: Setopati
यमुना अर्याल (काफ्ले) कात्तिक ८
सँगै पढेकी साथीसँग लामो समयपछि भेट भयो। ‘मेरो घर यहीँ नजिकै छ हिँड जाऔं.’...उसले निकै कर गरी ...
क्याम्पस पढ्दादेखि नै उसको जिद्दी गर्ने बानी अझै गएको रहेनछ।
धेरै नै कर गरेपछि उसको घर जान राजी भएँ।
ऊ बिहे पछिको पहिलो मलमास बार्न माइती आएकी थिई...।
पहिलो पटक उसको घरमा पुगेकी थिएँ, घरमा पुग्नासाथ बुवाआमासँग परिचय गराई।
‘ए नानी! तिमी यसको (छोरी) को साथी हौ? उसको बिहेमा नि आथ्यौ होइन त ’? बुवाले मेरो अनुहार हेरेर यसो लख काटे ...
‘आएकी थिएँ, नि बुवा...यो त मेरो सबभन्दा मिल्ने साथी हो, यसको बिहे छुटाएँ होला त’!
घरमामात्रै आज पहिलोचोटि आको हो...
लामै हाँसो फैलियो कोठाभरि...
‘ल नानी कुरा गर्दै गर म भान्सामा लागें,’ यति भनेर आमा भान्सातिर लागिन्।
छेउकै सोफामा बसेर बुवाले मेरो बारेमा बुझ्न खोजे।
‘अनि...नानीको घरमा को को छौ त’ ?
मेरो जवाफ, ‘बुवा, आमा, हामी तीन छोराछोरी’ ...
फेरि प्रश्न, ‘भनेपछि ...तिमी कुन चाहिँ पर्यौ त गन्तीमा’ ?
मेरो जवाफ , ‘म कान्छी’...
प्रश्न , ‘दाइहरूको बिहे भा’को छैन’?
उत्तर , ‘छैन’।
प्रश्न, ‘हुन त आजकालका केटीहरू चुरापोते लाएर हिँड्दैनन्, को विवाहित को अविवाहित केटी चिनिँदैन तिम्रो नि’...
उत्तर , ‘मेरो बिहे भा को छैन’...
आफ्नी छोरीतिर औंला देखाउँदै, ‘सन्ध्या र तिमीमा को जेठो कान्छो छौ’?
उत्तर , ‘खै थाहा छैन, उमेर जे भए पनि हामी क्लास्मेट चाहिँ हौं’।
बीचैमा सन्ध्या बोली, ‘ओहो! बुवालाई पूरै कुण्डली तयार पार्ने जसरी नानाथरी किन सोध्नुपर्ने ? ऊ मेरो साथी हो, मास्टर्स सकाएकी छ अंग्रेजीमा, हाम्रो क्लास टपर हो ऊ, तीस, चालिस हजार महिनामा तलब बुझ्छे, आफ्नो स्कुटीमा घर अफिस आऊजाऊ गर्छे, अरु केही बुझ्नु छ ? एकछिन आएको साथीलाई नानाथरी सोध्नुपर्छ’...सन्ध्या रिसाई।
‘आफ्नै छोरीको साथी मेरो पनि छोरी होइन त? एउटा बाउले छोरीलाई यति कुरा नि सोध्न पाउँदैन र नानी’ ? फेरि बुवाले मैतिर प्रश्न तेर्साए।
‘पाइन्छ बुवा जति पनि सोध्न पाइन्छ’ फेरि जवाफ फर्काएँ... ‘हेर नानी! सन्ध्याको बिहे भा को दुई वर्ष भयो। त्यो बेलामा त कति धेरै पढाएको छोरीलाई भन्थे ? अब त बिहे गर्ने उमेर भएन र नानी ?’
बुवाको यो प्रश्नको उत्तर दिनै मन लागेन तै पनि के भन्लान् भनेर जवाफ फर्काएँ, ‘मेरा दुई जना दाजुकै बिहे भा को छैन, मलाई के को हतार छ र’ ?
‘ओ नानी ! छोरा र छोरीमा धेरै अन्तर छ, सन्ध्याको दाइको पनि त बिहे गर्न बाँकी छ ... तिम्रै साथी हो क्यारे, उसको बिहे गर्दिहाल्यौं। अब हामी मरे पनि बई तरिन्छ भन्ने विश्वासमा छौं। छोराले जहिले बुहारी ल्याए पनि हामीलाई चिन्ता छैन, सबभन्दा ठूलो चिन्ता छोरीको हुन्छ’।
‘अब पढ्न बाँकी छैन, डिग्रीसम्म पढेर सकाइहाल्यौ, जागिर खाइसक्यौ अनि बिहे गर्नुपर्दैन? उमेर बढी भएपछि जो तो केटाले आँट्दैनन् नि’। मन नलागेरै फेरि बोलें, ‘बिहे गर्नैपर्छ भन्ने छ र बुवा ? राजेश हमालले पचास वर्षमा पनि केटी पाए त , हाम्ले नि कसो नपाउँला र ? बिहे गर्ने मन भयो भने.’...मेरो प्रश्नमा बुवा मौन बसे, थप सवाल जवाफ गर्न मन लागेन, आमाले चिया र भुटेको मकै ल्याएपछि कुरा रोकियो, मकै, चिया खाएर एकैछिन बसेर म त्यहाँबाट निस्किएँ।
म निस्किए पनि मभित्र गुजुमुज्ज भएका अघिका कुराहरू फिटिक्कै निस्किन मानेनन्, झनै गाडिएर बसे।
उनकी छोरीको बिहे भयो मेरा बाउआमालाई मेरो चिन्ता छैन, मेरा दाइलाई मेरो चिन्ता छैन , एकैछिन के देखा परेकी थें, प्रवचनै दिए बाले।
तिनकी छोरीको बिहे भयो भन्दैमा मैले नि गर्दिहाल्न पर्नि ? मैले बिहे नगर्दा साथीको बुवालाई के हानी भयो ? कति चासो अरुका छोरीको ? आफ्नी छोरी अन्माइहाले आनन्दले बस्नु नि!
यस्ता प्रश्न एकपछि अर्को उब्जिरहे।
यस्ता कति जन्जिरको सामना गरिरहनुपर्ने होला जिन्दगीमा????
एक जना बहिनीको भोगाइको एक अंश हो यो।
अंग्रेजीमा मास्टर्स सकाएकी ती बहिनी अविवाहित छन्। बहिनीजस्तै दुई जना दाजु पनि आ–आफ्नो इलममा व्यस्त छन्। तीन जना नै अविवाहित छन् अहिलेसम्म।
अविवाहित भएकोमा उनीहरूलाई केही बितेको छैन।
सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त छन्। बुवाआमालाई बुहारी भित्राउन, ज्वाइँ बनाउन उति साह्रो हतार नहोला तर समाजलाई भने खासगरी ती बहिनीको उमेरसँग हरबखत औडाहा हुन्छ। आफन्तलाई भित्रभित्रै जलन हुन्छ। अक्सर चाडवाडमा अनेक कुरा सुन्नुपर्छ उनले।
पोहोर साल दसैंमा बुढा भएका हजुरबा आमाको हातको टीका लगाउन मावल गइन्, हजुरबा आमाले टीका लगाइदिए, आर्शिवाद दिए,
‘ल नानी तैंले धेरै पढिसकिस्, जागिर खाइस् अब के गर्न बाँकी छ र ?
हेर बाबै तेरा उमेरका साथीका छोराछोरी बोर्डिङ पढ्ने भइसके ...
जे काम पनि बेलैमा गर्नपर्च...उमेर घर्केकी केटीलाई कस्ले ब्या गर्च ...
अर्को दसैंमा टीका लाउँदा नातिनी ज्वाइँसँगै देख्न पाइयोस्।
मर्नभन्दा अगाडि तेरो घरबार भएको हेर्ने धोको छ...यत्ति काम पूरा गर्देस नानी...’।
सेतै फुलेको कपाल, खुच्मुच्च परेको बुढ्यौली अनुहार, दाँत झरिसकेको मुखले भनेका यी आर्शिवाद बहिनीलाई खासै अनौठो लागेन।
जतिबेला आफून्दा सानी मामाकी छोरीको बिहे भइसकेको थियो, त्यो बेलादेखि हजुरबा आमाले यस्ता कुरा सुनाउँदै आएका थिए।
‘बहिनीलाई बिहे गर्न मन लाग्यो गरी, मलाई पढाइ सक्नुथ्यो, जागिर खानुथ्यो, आत्मनिर्भर बन्नुथ्यो त्यो गर्दैछु ...यसमा यतिधेरै चिन्ता, आपत्ति किन ? बुढा हजुरबा आमाको भनाइमा चित्त दुखाइ छैन, उहाँहरू त्यस्तै संस्कारमा हुर्कनुभयो... त्यही भोग्नुभयो तर अहिलेको पुस्ता पनि छोरीको उमेरसँग , उसले बिहे नगरेकोमा किन यत्ति सोच मग्न हुन्छ’ ?
अनि संविधानमा कहीँ उल्लेख भएको जस्तो त लाग्दैन,छोरी मान्छेले यत्ति उमेरभित्र बिहे गरिसक्नुपर्छ भनेर ...
कुनै तगारो, हदबन्दी लागेजस्तो देख्दिनँ। मेरो इच्छा हो बिहे गरूँ या नगरूँ, उमेर घर्केपछि गरूँ वा उमेर नघर्कंदै गरूँ...साँच्चिकै कति वर्ष पुगेपछि उमेर घर्केको मानिन्छ?
मैले केटै नपाएर, मलाई कोही केटा माग्नै नआएर यत्तिकै बसेको पक्कै होइन होला...
ममा पनि केही छ, म पनि केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासले यहाँसम्म आएकी हुँ, बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने नै सबैथोक हो र ?
हामी तीन जना नै दाजुबहिनी मास्टर्स पास गरेका छौं र आत्मनिर्भर छौं। परिवार खुसी छ, हामी सन्तुष्ट छौं, आफ्नो करियरमा दत्तचित्त भएर लागेका छौं, बुवाआमालाई खुसी दिएका छौं तर... अरुलाई किन चासो, चिन्ता हुन्छ ? त्यो पनि दाइहरूको होइन मेरो उमेरसँग। ममात्रै होइन मजस्ता धेरै छोरीहरूको उमेरसँग...
बहिनीले अफिसको घटना पनि सुनाइन्।
अफिसमा साथीभाइसँग रमाइलो पनि हुन्छ, सम्झना पनि हुन्छ भनेर सबैजना स्टाफको जन्ममिति सुरक्षितसँग राखिएको थियो।
उनको जन्मदिन आइतबार पर्यो, सबैजना कर्मचारी जम्मा भएर रमाइलो गरे... उनको शाखामा उनीजस्ता अविवाहित महिला कर्मचारी चार जना छन्। भोलिपल्ट अर्को शाखाका एक जना स्टाफ आएछन् र तिनै बहिनीलाई देखाएर थाहै नपाएझैं गरेर झटारो हान्न भ्याइहालेछन्...
‘ओहो ! म्याडम हिजो बर्ड डे पो हो क्यार ढिलै भए पनि शुभकामना है’...
‘ओ सरी म्याडम पो भनेछु... हजुर त अन-म्यारिड पो हो नि है’...
‘अनि नि मिस, हुन त छोरी मान्छेको उमेर सोध्न नहुने हो,
खैर... केही छैन अब यसो लाइफ पार्टनरको बारेमा पनि सोच्नुपर्यो नि ... यो शाखा त अन-म्यारिड शाखा होला है। हाँसीहाँसी कटाक्ष गरेछन् ती महोदयले।
बहिनी केही बोलिनन् रे।
अर्की एक जना साथीले फ्याट्ट जवाफ फर्काइछन्, ‘हाम्रा बाउआमालाई चिन्ता छैन। सर तपाईलाई कति पिर भो हाम्ले बिहे नगरेकोमा’ ? बिहे गरेर पर्मोशन हुन्छ भने म तयार छु..अर्की साथी बोलेपछि भने ती स्टाफ रातोपिरो भएर निस्किए रे।
अफिसमा जन्मदिनको रमाइलो गरेकी बहिनी घरमा पनि रमाइलो गरिन्, नजिकका आफन्त जम्मा भए, दुई दाजुकी एउटी बहिनी निकै फरुंग थिइन्। त्यतिकैका काकाले खिस्रिक्क पारेछन्, ‘जन्मदिनको केक त खुवाइस् नानी, अब त तेरो ब्या गर्ने बेला भएन भन्या ? मैले राम्रै ठाउँको कुरो चलाउँदा पढ्दै छु, पढाइ सकाउँछु भनिस् ’...
‘कतिसम्म पढ्ने विचार छ ?
पढ्नेले ब्या गरेर नि पढेका छन् भन्दा मलाई काँचै खाउँला झैं गरिस्...
मास्टर्स पढिस्, जागिर पनि खाइस् अझै के गर्न बाँकी छ र ?
अब उमेर ढल्किसक्यो, सधैं कान्छी छोरी नबन्, अब ब्या गर्नपर्च। आफु भन्दा साना बहिनीहरु छोरछोरी ल्याएर माइत आउँदा आफू बुढी भएँ कि भन्ने लाग्दैन? अहिले दाइहरुले फुरुक्क पारेका छन् भनेर हुन्च! भोलि भाउजू ल्याएपछि यत्रो उमेरसम्म किन नन्दलाई माइतीमै राखेको ? किन बुढीकन्या बनाएको भनेको सुन्दा नराम्रो होला नि।
हाम्रो कुलको इज्जत राख नानी। हाम्रो कुलमा ब्या गर्न बाँकी छोरी कोही छैनन्, सबभन्दा ठूली तैं होस्।’
जन्मदिनमा आएका काकाले ठूलै अपराध गरे जसरी झपारे।
मेरो सबभन्दा ठूलो अपराध केही छ भने त्यो आजसम्म नि बिहे नगर्नु हो र? मलाई दोषी करार गर्ने मुख्य कसूर मेरो यही उमेर हो।
जुन थप एक वर्ष परिपक्क भइसकेको छ।
‘ए काका मभन्दा साना बहिनीहरूलाई मैले जर्वजस्ती बिहे गर्न लाको हो र ? बिहे गरेपछि बच्चा हुनु कुन नौलो कुरा भयो फेरि ? तपाईका कुलका सबै छोरीले बिहे गरे, छोराछोरी पाए, माइती मावली आउजाउ गर्छन् तर उनीहरूले मैले जति पढेका छैनन्, मैले जस्तो जागिर खाएका छैनन्, मैले जस्तो स्वतन्त्र जिन्दगी जिएका छैनन्, यो कुरा किन थाहा पाउँदैनौ? मनमनै बिस्फोट गराएरै यी कुरा गुपचुप राखें।’ बहिनीले तीतो सत्य खुलाइन्।
मलाई बिहे गर्ने मन जहिले होला उहिले गरौंला कुनै बाधा अड्काऊ फुकाउनको लागि सविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो त लाग्दैन।
बिहे नगरेमा यस्तो सजाय हुन्छ भनेर पनि त कहीँ उल्लेख भाको पनि था छैन, यस्तो नितान्त निजी विषयलाई पनि किन समाजले यति साह्रो उचालिरहन्छ ?
मभन्दा चार पाँच वर्ष जेठा दाजुहरू बुढो कुमार नहुने मैमात्रै बुढीकन्या बन्नुपर्ने? दाइलाई किन कोही सोध्दैन, ए केटा हो तिमीहरूको बिहे गर्ने उमेर भएन भनेर ? कानूनमा त बिस वर्षभन्दा कम उमेरम बिहे गर्न पाइँदैन भनिएको छ, त्यसपछिको उमेरको हदबन्दी तोकेको त थाहा छैन।
बहिनीले गुनासोको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिन्।
अ साँच्चि छोरीको उमेरसँग किन यति त्रसित छ हाम्रो परिवार, समाज र आफन्तको झुन्ड?
के कोही छोरी छोरा जस्तै भएर जिउन सक्दैनन्?
के कोही छोरी आत्मनिर्भर भएर जिउन सक्दैनन्?
के कोही छोरी उमेर ढल्केपछि बिहे गर्न खोज्दा पाउँदैनन्?
छोराको उमेर नसोध्ने समाजले छोरीलाई किन तौलिरहन्छ?
छोरीको उमेरसँग होइन उसको शिक्षा, दक्षता र इमानसँग पनि हातेमालो गर्न सिकौं न।
हिजो, अस्ति के भयो त्यो होइन आज के हुन्छ ? र भोलि के गर्ने भन्ने सकारात्मक सोचमा अडिग बनौं न।
अवसर पाएका छोरीले बिहे नगर्दा पनि त नाम, दाम कमाएका छन् नि होइन र? केही गर्छौ भन्ने छोरीलाई उमेरको हदबन्दी लगाएर लोकसेवाको फारम भर्नबाट बञ्चित गरेजस्तो समाजबाट यति उमेरसम्म बिहे नगरेमा बञ्चित गर्नेजस्तो प्रावधान नराखौं।
विवाह नितान्त व्यक्तिगत मामला हो, छोरीको हकमा यही मामला शिक्षा, सीप र प्रगतिको बाधक नबनोस्, अंग्रेजी विषयको प्रोफेसर बन्ने यी बहिनीको उत्कृष्ट चाहना छ ढिलोचाँडो पूरा होस् चाहे उनले बिहे गरून् या नगरून्।
केही गर्छौ भन्ने यस्ता छोरीहरूलाई ठाडै नसोधियोस्-ओ नानी अझै बिहे गर्ने उमेर भा छैन ? भनेर...
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ८, २०७७, ०२:३३:००